Qalin V3: Nakhshadeynta naqshadeynta garaafka ee cusbooneysiisay | Laga soo bilaabo Linux
In badan oo idinka mid ah ayaa og Qalab, dhise interface garaafyada, in nano na baray si loogu rakibo qaybinta .deb. Waxaa gabi ahaanba la cusbooneysiiyay oo lagu kordhiyay shaqooyin cusub, taas oo ka dhigtay aalad aad u adag oo si sahlan loo rakibo.
1 Waa maxay qalin?
2 Qalabka V3 Qalabka
3 Sidee loo rakibaa qalin V3?
Waa maxay qalin?
Waa aalad bilaash ah, ilo furan iyo qalab isku dhaf ah wuxuu sameeyaa jaantusyo GUI ah iyo noocyo nooc ah oo qof kastaa isticmaali karo, way fududahay in la rakibo waana muhiimad weyn markay timaado abuuro majaajillo loogu talagalay barnaamijyada kala duwan ee maanta jira.
Nooca cusub ee qalin V3, ayaa dib looqoray dhamaanteed, si loo saxo dhibaatooyinka waxqabadka loona kordhiyo cabirka dalabka. Noocani waxaan ka shaqeynay nooc cusub oo ah fulinta iyo mishiinka soo gudbinta, laakiin intaa waxaa sii dheer, tiro badan oo horumarineed iyo astaamo cusub ayaa lagu daray, taas oo ka dhigaysa noocyadan dhise interface garaafyada mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan tan iyo markii la aasaasay.
Qalabka V3 Qalabka
Qalin V3 isticmaasha Electronka halkii laga duugi lahaa Mozilla XULRunner si aad u shaqeyso, tani waxay ka dhigeysaa lambarkaaga isha mid aad ugu fudud horumariyeyaasha.
Diirad saarida adeegsadaha isticmaalaha waa la cusboonaysiiyay.
Qalinku wuxuu hadda taageeraa bakhaarrada keydka ah ee foomamka (stencils & templates) ee ay ka faa'iideystaan ​​isticmaaleyaashu.
Waxay ku qalabaysan tahay shaashad cusub oo guriga ah, halkaas oo dukumiintiyadii ugu dambeeyay lagu soo bandhigay thumbnail.
Tiro badan oo hagaajin iyo hagaajin ah.
Sidee loo rakibaa qalin V3?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka qalinka V3 waa hagaajinta ay ku leedahay qeybinta arjiga, oo lagu gaaro waxyaabo kale iyadoo lagu mahadinayo ka mid noqoshada Elektaron. Si loo rakibo qalin V3 waa inaan kala soo baxnaa feylka rakibida ee ku habboon sida aad u jeceshahay.
Markaad soo dejiso waxaan sii wadnaa inaan ku rakibno maamulaha rakibaadda aan jecel nahay.
Hagaajinta lagu sameeyay qalinka waxay noo sheegaysaa inay mudan tahay in la tijaabiyo oo la isticmaalo maalin kasta, waa aalad ay inbadan oo inaga mid ahi isticmaalaan, laakiin taasi way isbadashay. Caadi ahaan waxaan u maleynayaa inay jiraan waxyaabo kale oo ikhtiyaarro ah oo bilaash ah oo ku jira ujeeddooyinkan oo ay aad u fudud yihiin in la isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Qalin V3: Nakhshadeeyaha isku xirka garaafyada ee la cusbooneysiiyay
yaourt -S hidde-qalin-bin
Jawaab Miguel Mayol Tur
Haddii aanan khaldamin waxaan rakibayaa nooca 2aad, ma hubin kartaa haddii v3 la heli karo?
Midka Miguel Mayol Tur uu faallooyinka ka dhiibtay waa nooca 3
Waxaa sidoo kale jira nooca 2 yaourt -S qalin
Waxaan ugu adeegsaday daaqadaha si aan u qaabeeyo isdhexgalka websaydhka, aad u faa'iido badan
Ku jawaab tupapa
Aad ayay u xun tahay waxaa loogu talagalay kaliya 64-bit naqshadaha… ..
Waxay u dhacday sidii gacmo gashi, waxaan raadinayay uun showgan. Mahadsanid.
Wanaagsantahay inaad kahesho
Waxaan kucusub nahay horumarka.
Qalabkani ma u yahay webka oo keliya mise waxaa loo isticmaali karaa barnaamijyada desktop-ka (Java)?
TrumpScript: Luqadda barnaamijka ee uu dhiirrigeliyey Donald Trump